RASMI: FA-ga England oo ku dhawaaqay sharciyo cusub ee loogu talagalay tababarayaasha kahor xili ciyaareedka cusub – Gool FM
RASMI: FA-ga England oo ku dhawaaqay sharciyo cusub ee loogu talagalay tababarayaasha kahor xili ciyaareedka cusub
Dajiye July 31, 2018
(England) 31 Luulyo 2018. Xiriirka kubada cagta dalka England ee FA-ga ayaa ku dhawaaqday sharciyo cusub oo loogu talagalay tababarayaasha koobka FA Cup iyo Carabao ee xilli ciyaareedka soo 2018-2019.
Xili ciyaareedkan FA-ga England ayaa wuxuu ku dhawaaqay in macalimiinta ay la kulmi doonaan kaararka digniinta iyo roosaha tartamada FA Cup iyo Carabao, taasoo lagu doonayo inay soo afjaraan murankooda joogtada ah.
Waxaa sidoo kale ganaaxyada sharciyadan cusub loo isticmaali doonaa Koobka Second League, oo inta badan ay ku tartamaan kooxaha heerka kowaad iyo kuwa heerka labaad.
Ganaaxyada noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2019-2020, hadii si guud loo soo dhaweeyo tijaabadan cusub iyo ganaaxyada ku xusan inta lagu jiro xili ciyaareedka cusub.
Jurgen Klopp oo ku niyad jabiyay jamaahiirta kooxda Liverpool go’aankan layaabka leh
Inter Milan oo u dhaqaaqeysa saxiixa Luka Modric iyo xidiga reer Croatia oo soo dhaweeyay